भरतपुरको सिटीहल र छ लेन सडकको शिलान्यास प्रधानमन्त्रीले गर्ने « Lokpath
२०७७, १२ माघ सोमवार ०८:४२
भरतपुरको सिटीहल र छ लेन सडकको शिलान्यास प्रधानमन्त्रीले गर्ने
प्रकाशित मिति : २०७७, १२ माघ सोमवार ०८:४२
चितवन । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माघ १७ गते चितवन आउने भएका छन् । भरतपुरमा दुई वटा विकास आयोजननाको शिलान्यास र जनसभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओली यहाँ आउन लागेका हुन् ।
नेकपा चितवनले आइतबार यहाँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको कार्यक्रमबारे जानकारी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला पार्टी कार्यालय संयोजक पार्वती रावलले भरतपुरमा निर्माण हुन लागेको सिटी हलको शिलान्यास प्रधानमन्त्रीबाट हुने जानकारी दिइन् । यसैगरी पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको पुल्चोक–गोन्द्राङ छ लेन सडक विस्तारको शुभारम्भ पनि प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् । उनका अनुसार यी दुई कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा हुन लागेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापतिसमेत रहेकी रावलका अनुसार उक्त कार्यक्रमपछि भरतपुरमा जनसभाको आयोजना गरिएको छ । भरतपुरको केन्द्रीय बस टर्मिनलमा मध्याह्न १२ः१५ बजे हुने जनसभालाई प्रधानमन्त्री ओलीसहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहलगायतका नेतो सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा आम जनसमुदायलाई चासो रहेका विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्ने रावलको भनाइ थियो । उनले भनिन्, “नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आगामी योजना के छ ? लगायतका समसामयिक प्रश्नमा स्पष्ट धारणा जनसमक्ष ल्याउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।” संसद् विघटन गर्नुपरेको बाध्यात्मक परिस्थितिबारे पनि सर्वसाधारणलाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ छ ।
बोलपत्र रकम एक अर्ब छ करोडको रहेकोमा ७७ करोड ७७ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । सिटीहलमा मुख्य अडिटोरियम ब्लकमा दुई हजार अट्ने सुविधासम्पन्न सभाहल हुनेछ । सँगै ३०० क्षमताको कन्फरेन्स हल रहने छ भने विशिष्ट व्यक्तिका लागि छुट्टै कक्ष हुने सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना भरतपुरका प्रमुख प्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । दुईवटा भर्याङ र दुइवटा लिफ्ट, प्रवेशद्वार, आकर्षक स्टेज, रिहर्सल कक्ष रहने छन् । मुख्य ब्लक छ हजार ५०० वर्गमिटरमा हुने उनको भनाइ छ । जुन क्षेत्रफल एक बिघाको हुनेछ ।
यस्तै नारायणगढको पुल्चोकदेखि गोन्द्राङ्गसम्मको छ लेन सडक दुई वर्ष चार महिनाभित्र बनिसक्ने गरी एक अर्ब १२ करोडमा ठेक्का लगाइएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको उक्त सडक खण्ड भरतपुरको मुख्य शहरी क्षेत्रमा पर्दछ । यी दुवै आयोजनाको काम शुरु भइसकेको छ ।
रुपन्देही । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभामा वर्तमान सरकारका बहुमत सांसद रहेको बताएका छन्
दूरसञ्चार प्राधिकरणका सेवा सुलभ, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन मन्त्री गुरुङको आग्रह
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी
भाषणका क्रममा वनमन्त्रीलाई ‘कन्फ्यूजन’, भिडियो क्लिप्स सामाजिक सञ्जालमा भाइरल !
काठमाडौं । नेपालका नेता, मन्त्री, राजनीतिकर्मीका शैक्षिक योग्यता र बौद्धिकतामा बेलाबखतमा प्रश्न उठिरहन्छ
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले कोभिड -१९ कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप
डिश होमले मेयर कपको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने
सम्झना बोहोराको हत्या प्रकरण : २० दिनपछि पत्ता लाग्यो हत्यारा,…
दूरसञ्चार प्राधिकरणका सेवा सुलभ, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन मन्त्री गुरुङको…